Isbeddelka itoobiya: xooggaga isku haya iyo awoodda warbaahinta ee Jawhar Maxamed (WQ: Sacad Aareeye) | CeelGardi News
Isbeddelka itoobiya: xooggaga isku haya iyo awoodda warbaahinta ee Jawhar Maxamed (WQ: Sacad Aareeye)
toobiya waa dal guun ah oo sooyaal fog leh. Haddii aad is tidhaadho, ka sheekee halkeed kasoo qabsanaysaa? Ma taariikhdan casriga ah? Ma tii Dhergiga? Mise tii EPRDF? Mise isbedelkan hadda socda iyo siduu ku bilaabmay? Qoraalkan waxaan kaga hadli doonaa kacdoonkii shacabku hoggaaamiynayay ee 2015kii ka bilaabmay Itoobiya iyo xooggaga isku haya awoodda.
Kacdoonkiii Itoobiya ka bilaabmay 2015kii waxa sababay qorshe lagu balaadhinayay casimadda iyo qoomiyadda Oromada oo cadaadis siyaasadeed iyo tacaddiyo qarnniyo ah tirsanayay. Kacdoonka oo ay hoggaaminayeen dhalinyaro wuxuu ka bilaabmay oo xuddun u ahayd magaalada AMBO. Kacdoonka waxa door firfircoon ka qaatay baraha bulshada oo uu udub-dhexaad u ahaa Jawaar Maxamed oo Maraykanka degganaa, hadda se Addis jooga. Jawaar wuxuu sameeyey Oromo Media Network oo u noqotay kacdoonka isha xogta la isku dhaafsado, la iska abaabulo ee lagu wada socdo. Waxgaradka Oromadu markii hore way ka sinnaayeen isbedel dalka ka dhaca oo Merera Gudina, Ibsa Daud, Lemma Megersa iyo Jawaar Maxamed dhan ayay wax u wada wadeen. Ceebtu se waxay soo baxday markii isbedelku dhacay ee ay Oromadu hoggaankii dalka qabatay. Waxa bilaabmay loolan iyo cidda Oromo ku daba faylayso.
Waxa xiiso gaar ah leh inuu mar qudha talada kusoo booday Dr Abiy Axmed oo aan wax badan laga aqoon ka hor bishiii Feebarweri 2018kii, markaasi oo loo doortay guddoomiyaha Oromo Peoples’ Democratic Organization (OPDO). Dr Abiy wuxuu ahaa xubin baarlamaanka Federalka ah.
Xooggaga Itoobiya isku haya maanta waxa ugu awood badan oo loolanka ugu badan ka dhexeeyaa qoomiyadda Oromada. Marka laga reebo Tigrayga oo xoog uga soo horjeeda maamulka hadda, qoomiyadaha kale ma muuqato mid abaabulan oo tartan kula jirta Oromada.
Oromada waxa ugu saamayn iyo awood badan oo hadda talada isku haya:
Dr Merera Gudina: Waa aqoonyahan bare sare ka ahaa jaamicadda Addis Ababa, hadda se waa guddoomiyaha xisbi mucaarad ah oo la yidhaahdo Oromo Federalist Congress (OFC). Merera wuxuu kasoo jeedaa Ambo oo 100km u jirta caasimadda. Waa xaruntii kacdoonkii guulaystay. Mabda’ ahaan xisbigiisu wuxuu aaminsan yahay Federaal, weliba wuxuu aaminsan yahay in afka Oromada iyo Amxaarada si wada jir ah dalka loogaga hadlo, maadaama Oromadu tahay qoomiyad balaadhan, kana badan qoomiyadda Amxaarada oo leh afka rasmiga ah ee dalka lagaga hadlo. Merera waa aqoonyahan wax badan ka qoray Itoobiya, hayeshee midow uu la sameeyey Oromo Liberation Front (OLF) oo Ibsa Daud hoggaamiyo, maaha mid suurtagal ah. Sababtu waa labada xisbi/jabhadood oo kala aaminsan afkaar iska soo hor jeedda—Federalism and Self-determination.
Ibsa Daud: Waa guddoomiyaha jabhadda Xorraynta Oromada—Oromo Liberation Front (OLF). Waa jabhad dagaal hubaysan kula jirtay Itoobiya oo Ra’iisalwasaare Abiy Axmed markuu xukunka qabtay dalka soo gashay, ka dib soo dhawayn layaab leh oo uu u fidiyay jabhadaha/axsaabta mucaaradka ah. Ibsa wuxuu ku guuldarraystay inuu xakameeyo dhalinyartii uu hubka u dhiibay oo iyaga oo sidii u hubaysan kasoo tallaabay xadka Itoobiya iyo Eriteriya. Jabhadda uu guddooyimaha u yahay, waxay dalka ka abuurtay qalalaase hor leh, isaguna (Ibsa) wuxuu xafiis ka furtay Addis Ababa oo waxa dhacayay waxba kama qaban, waxaanu u muuqday nin ay taladu farihiisa ka baxday. Mabda’ ahaan jabhaddiisu/xisbigiisu waxay aaminsan yihiin afkaarta aayo-katashiga, qorshahooduna waa inay Itoobiya ka go’aan. Hayeshee, warkaasi markii hore ee talada looga dhaartay ayuu dhego dabacsan heli jiray. Hadda Oromo ayaa taladii dalka haysa. Maaha jabhad/xisbi urursan, wuxuu se leeyahay taageerayaal nafta u huray maalmihii qadhaadhaa, welina taageersan.
3. Jawar Maxamed: Waa nin dhalinyar ah oo Maraykanka degganaa, hadda se Addis xafiis ku leh. Wuxuu ka faa’iidaystay qoomayddiisa oo aan talada wax badan ku lahayn iyo tiknoolajiga casriga ah gaar ahaan baraha bulshada—Facebook. Waxa ku xidhan bartiisa Facebook 1.7 milyan oo qof, warbaahintiisa Oromo Media Network na waxay ahayd goob shamac u noqotay kacdoonkii dalka ka socday dhawr sanno ka hor ee lagu guulaystay in hoggaankii jiray meesha laga saaro. Wuxuu ka soo jeedaa agagaarka Harar. Xog qarsoodi ah oo ay heshay Finnfine Intercept, waxa lagu sheegay in Jawaar qorshaynayo inuu xil isku sharraxo doorashada May 2020ka, haddana wuxuu ka shaqaynayaa siduu iskaga celin lahaa baasaaboorkiisa Maraykanka ah, maadaama oo sharcigu aanu u ogolayn inuu xil qabto qof haysta dhasho dal shisheeye. Jawaar waxa uu sameeyey oo ku xidhan, kana amar qaata koox dhalinyaro Oromo ah oo afka Oromada la yidhaahdo QEERRO. Todobaadkan ayuu dib u abaabulay, kadib markii uu baraha bulshada kala hadlay. Maqaal uu ku qoray kal-soobaxa Addis Standard bishii Juun, 2018kii wuxuu kaga hadlay isbedelka socda, isaga oo si qotodheer u faalleeyey. Khilaafka u dhexeeya Jawaar iyo Ra’iisalwasaare Abiy Axmed, ayaa soo shaacbaxay, kadib markii uu Ra’iisalwasaaruhu golaha shacabka oo uu weydiimo ugaga jawaabayay fadhi ay lahaayeen ku sheegay inay jirto warbaahin ay leeyihiin dad marka ay Itoobiya wanaagsan tahay na la jira, markay dhib waajahdana ka yaacaa. Hadalkaa waxa lagu macneeyey inuu Jawaar iyo OMN u jeedo.
Lemma Megersa/ Abiy Axmed:
Lemma waa wasiirka gaashaandhigga ee hadda iyo guddoomiye ku xigeenka xisbiga Oromada oo hadda loosoo gaabiyo ODP, markii hore na la odhan jiray OPDO. 2016kii ayuu noqday madaxweynaha kililka Oromada. Waa nin awood badan oo waa sababta Abiy Axmed ugu soo daray golaha wasiiradda. Waxa loogu yeedhaa, gaar ahaan Abiy ku sheegaa ‘my former boss’. Oromadu aad ayay u ixtiraamtaa, markii kacdoonka iyo muddaharaadyadu socdeenna waxay ku dhawaaqi jireeen shacabka Oromadu, ra’iisalwasaaraha/madaxweynaha yagu waa Lemma. Shaki la’aan isaga ayaa noqon lahaa Ra’iisalwasaare, hadday Oromadu fursaddaa hesho, markii uu is casilay Xayla Mariyam Dasaalin, waxa se xannibay inaanu ahayn xubin baarlamaanka ka tirsan. Hadda wuxuu garab iyo gaashaan ba u yahay Ra’iisalwasaare Abiy, wuxuuna qorshaynayaa inuu noqdo xubin baarlamaan. Wuxuu kasoo jeedaa agagaarka Addis Ababa.
Abiy Axmed: waa Ra’iisalwasaaraha dalka, guddoomiyaha ODP iyo EPRDF. Wuxuu ka tirsanaan jiray ciidanka, gaar ahaan waxa lagu sheegaa nin door muuqda kasoo qaatay dhismaha hay’adda sirdoonka qaranka. 2010kii ayuu noqday xubin baarlamaan, xil wasiirnnimo na wuu soo qabtay. Markii uu is casilay Ra’iisalwasaarihii ka horreeyey, Oromadu, gaar ahaan xisbiga OPDO, hadda se la yidhaahdo Oromo Democratic Party—ODP, kuxigeen ayuu ka ahaa. Hayeeshee Oromadu waxay samaysay istaraatajiyad cajiib ah oo Lemma iyo Abiy ayay xilalkii xisbiga u kala bedeshay oo marka hore kala ahaa guddoomiye iyo kuxigeen siday u kala horreeyaan. Aad ayaa loogu ammaanaa Lemma inaanu la xafiiltamin Abiy ee uu dhisay oo door muuqda ka qaatay. Hadda waa jaal Lemma iyo Abiy, umana muuqato inuu Abiy kala kulmayo tartan saaxiibkii Lemma. Abiy Axmed wuxuu sumcad badan ku helay, kadib markii isaga oo xubin baarlamaan ah uu xalliyay khilaaf u dhexeeyay ood-wadaag muslim iyo kiristaan ahayd. Isbedel badan ayuu Itoobiya ka sameeyey Abiy muddadan kooban ee uu xilka hayay, taasi se halkan kaga hadli mayno, maadaam oo aynu ku koobannahay xooggaga ku hirdamaya mustaqbalka dalka.
La soco qormadda 2aad oo ku saabsan isbarbardhigga loolankii Tigrayga dhexdiisa ee 2001dii: Tewodle-Siya Faction Versus Meles-Sebhan Nega Faction iyo kan hadda ka taagan ODP dhexdeeda.
W/Q: Sacad Aareeye